Anosy mamirapiratra : tetikasa mamaly ny sosialim-bahoaka – Depeche TARATRA
Accueil/Social/Anosy mamirapiratra : tetikasa mamaly ny sosialim-bahoaka
Tiana il y a 1 semaine
Tetikasa voarafitra amin’ny alalan’ny « maquette » miisa 12 no volavolain’ny ONG Mamafaza voa 888 ka ny 02 amin’izy ireo dia mamaly ny sosialim-bahoaka mivantana . Tafiditra ao anatin’izany ny tetikasa Anosy mamirapiratra, izay ahitana fanovana maro, toy ny fiantsonana telo sy tsena lehibe ao ambaniny, ahitana làla-masinina, dobo filomanosana.
Ity tetikasa ity no ahafahana hanantanteraka ny tetikasa 02 lehibe mamaly ny sosialim-bahoaka antsoina hoe, Tolotra sy Vonjy, gasy manan-trano, hoy ny Filoha nasionalin’ny ONG Mamafaza Voa 888 , Andriambololona Rindra Ny Ony. Mitentina 2 miliara any ho any ny vola lany tamin’ny fandrafentana ireo tetikasa ireo izay efa novolavolaina nandritry ny efa taona raha ny nambarany.
Ny volana janoary 2022 ho avy izao no hanatanterahana ny fampafantarana azy ireo amin’ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny eto amin’ny firenena. Distrika 6 eto Antananarivo no ho voakasiky ny tetikasa fa ny faritra manerana ny Madagasikara no hisitraka ny tombotsoa azo avy aminy. Tsiahivina fa efa may niaraka tamin’ny tranon’ny ONEP ny volana septambra lasa teo ny « maquette » lehibe Anosy mamirapiratra ka efa tafarina ny 95% amin’izany ankehitriny.
Sambava : Soustraire les jeunes à la délinquances
Détournement des aides : la députée d’Amboasary Atsimo dément l’arrestation d’une dizaine de personnes
Covid-19: Analamanga reste l’épicentre
Vohibato :nahazo EPP roa vaovao
“Tsinjo-fahasalamana an-tsekoly”: distrika 114 manerana an’i Madagasikara no hisitraka izany
Ambatondrazaka: mikatona amin’ny 3 ora hariva ny tsena